I-Apple yayisele izokwazisa i-Apple ceramic emnyama | IPhone iindaba
Eminye imifanekiso isandula ukuvuza iveza iprototype ceramic Apple Watch Series 5 engena kuyo umbala omnyama. Inkampani ekugqibeleni yasilahla eso sigqibelo, kwaye saqala ukubona i-ceramic emhlophe ye-Apple Watch.
Ukugqitywa kweceramic okuye kwavela kuthotho 2, kwaye kwahlala kuthotho 3 no-5. Okwangoku uthotho 6 alusenalo olo khetho. Ukugqitywa okwenza i-Apple Watch ibize 1.300 iiYurophu. Ayisiyo mali ininzi iwotshi, kodwa ngokucacileyo ewe yeswatchwatch.
Eminye imifanekiso ikhutshiwe Twitter Umzekelo weApple Watch prototype zobumba ngombala omnyama, kunye nenguqulelo eyayithengiswe emhlophe.
Njengoko kusaziwa, iApple Watch Series 5 yayithengiswa kuphela ngokugqitywa kweceramic ngaphakathi umbala omhlophe oqaqambileyo. Kubonakala ngathi bekukho injongo kwinxalenye yeApple ukuyenza emnyama, kodwa ekugqibeleni iyaliwe.
Mhlawumbi yenze njalo kuba yayikukugqitywa okufanayo ukuya I-Apple Jonga indawo emnyama, kunye nezindlu zentsimbi ezingenasici, ukugqiba okumnyama okumnyama. Ngeba ziimodeli ezimbini eziphantse zafana neliso.
I-Apple yazisa nge-ceramic Apple Watch Edition ngo-Series 2. Kunyaka olandelayo, yakhupha i-Series 3 ceramic, kodwa ngwevu. Kuluhlu lwe-4, inkampani iyisusile loo nto, kwaye kwakungekho ndlela yokuyithenga ngesamente. Akukho ngwevu okanye mhlophe.
Kunyaka kamva, njengakwiGuadiana, yaphinda yavela kwakhona. I-Apple ivuselele imodeli ephezulu yodongwe emhlophe ye Uthotho 5. Ngoluhlu lwe-Apple Watch 6 lwamva nje, iphinde yalahleka ukuze ikwazi ukuyithenga ngeso sigqibelo.
Ngoku unokukhetha titanium ilula kwaye yomelele kune yenziwe ngentsimbi eshayinayo. Uhlobo oluqhelekileyo ngumzimba we ialuminium, ngemibala eyahlukeneyo onokukhetha kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » UApple wayesele eza kumilisela iApple Watch yodongwe emnyama
Ishumi elinambini lase Mzantsi liphehlelela iMagSafe SurfacePad entsha, ityala elitsha le-iPhone 12